काठमाडौंकाे हावा विश्वकै सबैभन्दा विषाक्त : घर बाहिर ननिस्कन आग्रह
पाेखरा । तपाईं आज बिना काम घर बाहिर निस्कदै हुनुन्छ भने होसियार १ काठमाडौँ उपत्यकाको वायु अहिलेसम्मै प्रदुषित भएको पाइएको छ । मङ्गलबार अर्थात् आजको वायु अहिलसम्मकै दुषित भएको वन तथा बातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वायु प्रदुषणको तह उच्च विन्दुमा पुगेपछि अमेरिकी राजदूतावासले पनि घरभित्र बस्दा भmयाल ढोका बन्दा गरेर, मास्क लगाएर बस्न सुझाव दिएको छ । प्रदूषित वातावरणमा सावधानी अपनाएर हिँड्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
वायुप्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नै पर्छ । तर, कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ संक्रमित बिरामीलाई वायुप्रदूषणले झनै नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । वायुप्रदूषणले विश्वमा कोभिड संक्रमितको मृत्युदर ३ प्रतिशतले बढाउने सहयोग गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । वायुप्रदूषणले सिधै श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा असर गर्ने भएकाले स्वास्थ्य गम्भीर समस्या निम्ताउन सक्ने शुक्रराज तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुन बताउँछन् । ‘वायुप्रदूषणले डबल हिट गर्छ, अर्थात् कोरोनाभाइरस हुँदा पनि फोक्सोमा संक्रमण गर्छ भने श्वासप्रश्वास प्रक्रिया पनि त्यहीबाट हुने भएकाले स्वास्थ्य समस्या झन् बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।
उपत्यको बातावरण धुँवामय भएका बेला सकेसम्म विनाकाम घरबाहिर ननिस्कन उनले आग्रह गरे । जाडो भयो भन्दैमा वातावरण दूषित भएको बेलामा आगो बालेर नताप्न समेत बातावरण विभागका उप—महानिर्देशक जोशीले जोड दिए । उपत्यका भित्र वायुप्रदूषण भएका बोलामा दीर्घरोगी, दमको समस्या भएका, कोभिड संक्रमण भएले सकेसम्म आगो नताप्दा राम्रो हुने उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषित वातावरणमा यात्रा गर्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग, चस्माको प्रयोग गर्न समेत उप महानिर्देशक जोशीको आग्रह छ । यस समयमा घरभित्र बस्दा बस्दा भ्mयाल ढोका लगाएर वा मस्कको प्रयोग गर्दा पनि राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।
मंगलबार, पुस २१, २०७७, १४:३१:००
संसारलाई नयाँ चुनाैति : जहाज उडाउँदै पाइलटले बनाए कोरोनाको सुई !
खप्तडमा अहिलेसम्मकै भारी हिमपात, माइनस पाँच डिग्री तापक्रम
शनिबार, जेठ १०, २०७७ सारङ्गी न्युज
'किन भर्चुअल क्लास सञ्चालन नगर्ने मन्त्रीज्यू ?' भनेर आफूलाई पटक पटक प्रश्न आउने गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै मन्त्री पुनले गण्डकी प्रदेशमा इन्टरनेट होइन, रेडियो र सामान्य टेलिभिजनसमेत नपुगेको ठाउँ रहेको बताइन् । त्यस अर्थमा सर्वप्रथम स्थानीय सरकारहरुले आधारभूत सुविधा व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा पुनले राखिन् । पुरा पढ्नुहोस्
शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ सारङ्गी न्युज
गाउँपालिकाकाका बिरामीलाई निःशुल्क रगत १० मिनेट पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीकाे आह्वानमा ११ बजे सर्वदलीय बैठक बस्दै ४८ मिनेट पहिले